Mayelana NATHI - Quanzhou Omi Apparel Co., Ltd
Amaketanga ethu wokuhlinzeka
I-Quanzhou Omi Apparel Co., Ltd yasungulwa ngo-2008 ukusekela amakhasimende amaningi ngokwengeziwe avela kuwo wonke umhlaba. Njengenkampani yokukhiqiza yezemidlalo ifaka, sigcine inzuzo ende yokuma, isipiliyoni esinqwabelene nesimangazayo kumikhiqizo ye-R & D, ukukhiqiza, ukulethwa kwamakhasimende nokulawulwa kwekhwalithi.
Ngokuzibophezela kwethu kwikhwalithi yomkhiqizo, ubungcweti nokwenza ngcono izinqubo zethu, sihlose ukwenza yonke inqubo yokukhiqiza isembatho sibe yinto elula, emnandi futhi engenazihibe yekhasimende.
Ngokwesiko lethu eliqhutshwa yimiklamo, idrayivu nobuchwepheshe besisebenzi ngasinye, simiswe ngokukhethekile ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme kunkampani yamakhasimende yomhlaba wonke.
Ukuze ube yinkampani eqonda kangcono futhi yanelise umkhiqizo, insizakalo kanye nezidingo zemikhiqizo yezemfashini emhlabeni jikelele
Ukunikeza indawo enhle yokusebenza lapho abantu bekhuthazwa ukuba bakhule futhi banikele ngokusemandleni abo
Ukuze ube nguzakwethu onokwethenjelwa nosizayo odlula okulindelwe
Ukukhiqiza imikhiqizo ehlangabezana nokulindelwe kwekhwalithi yamakhasimende ethu namakhasimende abo
Ukukhulisa inethiwekhi yabalingani nokwakha ukwethembeka kokunye
Qinisekisa ukuthi abalingani bethu banikela ngeholo elifanele kanye nendawo yokusebenza ephephile
Ukuba ngumlingani othembekile ngokugcina izindinganiso zokwethembeka nokuvikela i-IP yamakhasimende ethu
Sinabasebenzi abaqeqeshiwe ku-R & D, Ubuchwepheshe, ukukhiqizwa, nezinsizakalo. Siyiqembu elinokuhlanganiswa okuqinile okusebenzela ukufeza umgomo owodwa: ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngezinsiza ezilula zokumisa ngokugcina ubuchwepheshe bungasekelwa kuphela kodwa nobuqotho nobungani.
Sigxile ekugqokeni okusebenzayo, isembatho sezemidlalo, nokugqoka kwangaphandle. Imikhiqizo yethu ibigxile ekuqoqweni kwe-premium nezingubo zemidlalo ezisebenzayo. Okufana nokugqoka okugijimayo, izingubo zokucindezelwa, ukugqoka kwe-yoga nokuqina, ukugqoka amabhayisikili namabhantshi angaphandle asebusika, afakwa kakhulu ngokuphefumula, i-UV-proof kanye nokoma okusheshayo. Ngasikhathi sinye, singaphansi kokukhulisa indwangu entsha enokwakha okunobungane, i-R-PET, okusenza sikwazi ukuncintisana futhi sivelele.
Siba nokuncintisana okuthe xaxa ngokuhlanganiswa kokuthengwa kwempahla, hhayi kuphela ukuthuthukiswa kanye nokwesekwa kokukhiqiza okuvela ezinhlakeni zangaphakathi zokukhiqiza, futhi nobudlelwano obusondelene nezimboni eziningi ezinhle kakhulu nabathengisi abasezweni laseChina, eTaiwan nase-Asia, abagxile kuzo zonke izinhlobo zokugqoka kwezemidlalo.